Chapa Bata - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
जनकपुर, जेठ ९ -
तराई-मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु आगामी जेठ ३१ मा हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
काठमाडौं, जेठ ९ -
मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले थप कुनै माग नराखे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् । मंगलबार संसद्मा विशेष सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदार दल कांग्रेससँगको पूर्वसहमतिअनुसार राजीनामा दिन लागेका हुन् । यो खबरलाई हामीले आजको नयाँ पत्रिकामा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।
काठमाडौं, जेड ९ -
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तत्काल सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विपक्षमा उभिएको छ । तत्काल नेतृत्व परिवर्तन निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै एमाले विपक्षमा उभिएको हो। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
मंगलबार, जेठ ९ -
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गलत कार्यशैली र व्यक्तिगत स्वार्थ कै कारण पार्टी दोस्रो स्थानमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौ।
काठमाडौं,जेठ ९ -
संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै केन्द्रमा रहेका मन्त्रालय घटाउने तयारी गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा पुरानै संचरनाअनुसार कार्यक्रम र रकम विभाजन हुने भएको छ । केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयको संख्या १६ मात्रै गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए पनि बजेट भने पुरानै संरचनाअनुसार विनियोजन हुने भएको हो । यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
गत साउनमा प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले सुरुमै भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिँदै विशेष दूत खटाउने निर्णय गरे । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रुपमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीन भ्रमण गरे । भारतसँग विगतमा बिग्रिएको सम्बन्ध प्रचण्डको कार्यकालमा सुमधुर भयो । सरकारले भारतसँग नेपालका समस्या र एजेन्डा प्रष्टसँग भनेको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
समयमै कार्यालय आउने, मुद्दा सुनुवाइ गर्ने र समयमै घर फर्कने। केहीबेर परिवारसँग समय बिताउने र लेखपढ गरेर समयमै सुत्ने, अनि समयमै उठ्ने। घरमै पकाएको मात्र खाने। आहारविहारको अनुशासन कुनै हालतमा नतोड्ने।
बझाङ, जेठ ९ -
बुधबार दिउँसो १ बजे करिब ४५ परिवारको बसोबास रहेको सुर्मा गाउँपालिकाको थुकुन्डा गाउँका प्रयाः सबै घरका ढोकामा ताला झुन्डिएको थिए। ३ सय ५० जनाको बसोबास रहेको गाउँमा मध्यान्हमा पनि मानिसको चालचुल थिएन।आधा गाउँ घुमिसकेपछि दायाँतिर अग्लो ठाउँमा बालबालिकाको गुनगुन सुनियो।
काठमाडौं, जेठ ८ -
सरकारले हुलाकी राजमार्गमा १० नयाँ सहर बनाउने भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माण भइरहेका सहर जस्तै हुलाकी मार्गमा पनि आधुनिक सहर निर्माण गर्न लागिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार हुलाकी राजमार्गको ३ किमि दायाँ–बायाँ सहर बनाइनेछ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी बढाए पनि अब स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्दा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हो ।
राजधानीमा दैनिक ७ सय ५० को हाराहारीमा राँगा भैंसी काटिन्छन्। २ हजारको संख्यामा खसी बोका काटिने गरेका छन्। कति कुखरा काटिन्छन् भन्ने आँकडा नै छैन, तर अचम्म महानगरमा हरेक दिन सयौं‌को संख्यामा पुशवक्षीं बध गरिँदा समेत त्यसको कुनै स्वास्थ्य परीक्षण नै गरिँदैन। यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचारपत्रबाट लिएका हौ।
महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणसँगै नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बढुवा रोकिँदा संगठनभित्र वितृष्णा बढेको छ। पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले गत मंसिरमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को २३ पद रिक्त हुँदा पनि १५ जनाको मात्र बढुवा गरे। बाँकी आठ पदमा अझै पनि बढुवा भएको छैन। त्यसबेला अर्यालले ती पदमा बढुवा नगर्दाको प्रत्यक्ष असर अहिले पनि रहेको संगठनका वरिष्ठ अधिकृत बताउँछन्। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा सुवास गोतामेले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको भद्र सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गर्ने भएका छन्। सोमबारदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपर्णबाट लिएका हौ।
प्रतिस्पर्धा गर्दै टेलिकम कम्पनी
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच पछिल्लो समय सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । टेलिकममा एकपछि अर्को नयाँ प्रविधि भित्रन थालेपछि प्रतिस्पर्धा पनि बढेको हो ।टेलिकम कम्पनीले प्रयोग गर्ने प्रविधि चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट सेवा फोरजीसम्म हुन थालेको छ । विश्वमै टेलिकम क्षेत्रमा हुने नयाँ अनुसन्धान र प्रयोगले पनि सेवाप्रदायकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।
१० जिल्लामा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको परिणाम शुन्य!
माओवादीले प्रदेश नम्बर ६ का दैलेख र मुगु ४ नम्बरका कास्की, पर्वत स्याङ्जा मनाङ, मुस्ताङ र ३ नम्बरका काठमाडौं, भक्तपुर, दोलखा जिल्लाका नगरपालिका/गाउँपालिका वडा प्रमुखमा समेत खाता खोल्न सकेन। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार, के–के छन् कार्यक्रममा ?
काठमाडौं, जेठ ८ - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएकी छिन् । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डस...
बजेट १२ खर्ब नाघ्ने, नीति तथा कार्यक्रम पारित
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खर्बभन्दा माथि पुग्ने भएको छ । सीमाभन्दा बढी हुने गरी आएका माग सम्बोधन गर्नुका साथै ठूलो रकम स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भएपछि बजेटको सीमा संशोधन गर्ने तयारी भएको छ। यो खबर सुजित महत/नवीन अर्यालले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
माओवादी ३, कांग्रेस २ र एमाले एक जिल्लामा शून्य
पहिलो चरणमा ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा माओवादीले १४, कांग्रेसले तीन र एमालेले दुई जिल्लामा एउटै तहमा पनि जित्न सकेनन्। काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा–लेखनाथ, ललितपुर महानगर, हेटौँडा उपमहानगरसहित बूढानीलकण्ठ र कागेश्वर मनोहरा नगरपालिकाको नतिजा आउन भने बाँकी छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
आयल निगमलाई नाफा, उपभोक्तालाई चर्को मूल्य
काठमाडौं, जेठ ४ -
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेपछि नेपाल आयल निगमको नाफा २० करोड रुपैयाँ नाघेको छ। भारतीय आयल निगमले मे १६ मा पठाएको मूल्यअनुसार निगमको पाक्षिक नाफा २० करोड रुपैयाँ पुगेको कान्तिपुरमा राजु चौधरीले लेखेका छन्।
ललितपुर, जेठ ४ -
दासढुंगा काण्डको प्रमाण कांग्रेसकै कारण नष्ट भयोः ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसकै कारण दासढुंगा हत्याकाण्डको रहस्य पत्ता नलागेको आरोप लगाएका छन्।
सत्ता दौडमा एमाले पनि
गौतमलाई चयन गर्दै अप्ठेरोमा पार्ने रणनीति हो भन्ने जिज्ञासामा श्रेष्ठले भने, ‘एमालेभित्र गौतम मात्रै होइन केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपालजस्ता म्यारोडोना, पेले र रोनाल्डो रहेकाले दाहालको राजीनामापछि कुनै एक नेताले गोल गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीको पदमा सुट गर्ने मौका पाउनासाथ कोही न कोही एमाले नेता गोल गर्दै प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ।’
काठमाडौं महानगरका मेयर र उपमेयरलाई भाडाको कोठा
पुरानो भवन भुइँचालोले क्षतिग्रस्त भएपछि भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो जननिर्वाचित मेयर तथा उपमेयरलाई पनि त्यही भाडाको घरमा स्वागत गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ८ गते राजीनामा गर्दै
प्रधानमन्त्रीले ८ गते संसद्लाई सम्बोधन गरी राजीनामा दिने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताए । ‘भोलि (बिहीबार) या पर्सि (शुक्रबार) यो हिउँदे अधिवेशन बन्द हुन्छ, अनि ८ गते वर्षे अधिवेशन बोलाएर त्यसै दिन संसद्लाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सामान्य तयारी छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव नयाँ सरकारले गर्छ।’
सवा १ करोड सिमकार्ड प्रयोग भएन
काठमाडौं, जेठ २ -
नेपाल टेलिकम र एनसेलका सवा एक करोड सिमकार्ड प्रयोगविहिन रहेको फेला परेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा राजु बास्कोटाले समाचार लेखेका छन्।
मारिएका बटाला राप्रपाका उमेद्वार
जुम्ला, जेठ २ -
नरहरीनाथ गाउँपालिका ६ को मालकोटमा नन्दादेवी मावि मतदान केन्द्रमा आइतबारसाँझ भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका धनरुप बटाला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता नभइ राप्रपाका वडा अध्यक्षका उमेद्वार भएको पुष्टि भएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा गोबिन्द देवकोटाले समाचार लेखेका छन्।
एमाले अघिअघि, कांग्रेस पछिपछि
पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणामअनुसार प्रमुख ४ महापालिकासहित अधिकांश गाउँपालिकामा एमाले अघिअघि त्यसपछि क्रमश कांग्रेस र माओवादी केन्द्र देखिएका छन् ।
मतगणना अति सुस्त
काठमाडाैं जेठ २ -
काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना सोमबार दिउँसो २ बजे सुरु गरियो । साँझ ९ बजेसम्म (७ घण्टामा) जम्मा २ सय मत गनियो । एउटा मत गन्न सरदर २.१ मिनेट लाग्यो । कान्तिपुर दैनिकमा जगदीश्वर पाण्डेले समाचार लेखेका छन्।
उमेद्वार नभएपनि सबैभन्दा बढी भोट
ललितपुर जेठ २ -
ललितपुर महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपाबीच तालमेल भयो जसअनुसार एमालेले उपमेयरमा राप्रपालाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो । अर्थात् ललितपुर महानगरमा एमालेका उपमेयर उम्मेदवार नै थिएनन् । तर, वडा नं १ को मतगणना गर्दा उपमेयरमा एमालेले सबभन्दा बढी मत पाएको छ ।